केसीको अनसन : कागले कान लग्यो भन्दैमा कान छाम्ने की कागको पछि दगुर्ने ? - Ratopati
| अर्जुन अधिकारी
मेरो नेपालमा कार्यरत सिनियर चिकित्सक मध्ये ८० प्रतिशत संग दोहोरो रुपमा चिनजान छ । तर डाक्टर गोविन्द केसीलाई मैले सुनेको बाहेक चिनेको छैन र सायद उनले पनि चिनेका छैनन् होला जस्तो लाग्छ । किनकि अनसन बस्नु भन्दा अगाडि केसीलाई उनका सहपाठी बाहेक अरु नागरिकले चिनेका थिएनन् त्यसमा म पनि एक हो । जनताले चिन्ने कुरात धेरै परको विषय हो । अझ अनसनकै कारण पछिल्ला समय उनी चिकित्सक रहेको जानकारी जनताले थाँहा पाए । अझ रोचक विषयत के छ भने उनी केका डाक्टर हुन उनका आजका समर्थकलाईनै थाहाँ छैन् । आजसम्म मैले कुनै पनि विरामीले डाक्टर गोविन्द केसीलाई चेकअप गराउन जादैछु भनेको सुनेको छैन् ।
म उहाँलाई सोध्न चाहान्छु तपाईले कति विरामीको उपचार गर्नुभयो, र अप्रेसन । अनी चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान देखाएकर अनसन बस्दा आफैले काम गरेको अस्पतालमा कति सुधार भए । तथ्याङ्ग सहित दिन सक्नुहुन्छ ? कहि कतै २० औं बर्ष अगाडिको एउटा तस्वीर सामाजीक संझालमा हालेर भ्रम फैलाएरै जनताको मन जित्ने भए मैले केहि भन्नु छैन् । तर समय अनुसार चल्न सक्नु पर्छ । मुलुकमा के आवश्यक छ र छैन् । डाक्टर गोविन्द केसीको नामले आजभन्दा अगाडि कति जनताले उनलाई चिन्दथे मुख्य विषय त्यहा छ । एउटा चिकित्सक अनसनले हैन सेवाको हिसावले चिनिनु अति उत्तम हुन्छ । उनले जति सेवा गरे त्यसको कयौं गुणा त केसीले नै माफिया भनेका भोला रिजालले गरेका होलान् ताकी उनलाई यो मुलुकमा नचिन्ने व्यत्ति सायद औलामा गन्न सकिने मात्रै होलान् ।
डाक्टर रिजाल र उनीजस्ता नाम कहलिएका चिकित्सक फोटो सेसनका लागी हैन सेवाका लागी देशका कुना कुनामा पुगेका छन् । यस्तै अवस्था आउने थाहा भएको भए उनले पनि गरिबका घरमा कयौ पटक पुगेका थिए केसीको भन्दा राम्रो पोज मिलाएर फोटो खिचेर ल्याउथे होलानी ? तर उनले प्रचार बाजि भन्दा पनि सेवालाई आफ्नो पहिलो प्रार्थमिकता ठाने आज केसी सेवाका नाममा प्रचारबाजीमा लागीरहेका छन् । म भोला रिजाललाई भित्री रुपमा राम्रो संग चिन्दीन तर उनलाई परै बाट भएपनि राम्रो सुनेको र बुझेको छु । भोला रिजाल र गोविन्द केसीमा आकास र पतालको फरक छ ।
मलाई मेडिकल कलेजको सिट घटाएर, शुल्क निर्धारण गरे, कलेज खोल्न नदिएर केहि गुनासो छैन तर पिडा छ मेरा भावि पुस्ताले पढ्न चाहेको खण्डमा स्वदेशमा पढाउने नपाउने विषयले मलाई पोलेको छ । पढिरहेका लाई यो लेख मन नपर्न सक्छ तर गंभिर भएर सोच्नुस त यतार्थ के हो । र गोविन्द केसीले बोकेको एजेण्डा केहो । के हामी सिट घटाएर स्वदेशमा पढाउन सक्छौं कलेज खोल्न नदिएर विद्यार्थी नेपालमा पढाउन सक्छौं । नेपालीहरुले नेपालमा बसेस पढ्ने अधिकार छ्रैन् ? छैन भने संविधानमै लेखौं नेपाली विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न पाउने छैनन् । पढ्नु पर्ने भए विदेश गएर पढ्नु पर्नेछ । हैन भने किन सिट कटौंति, कलेज खोल्न नदिने । यहि हो शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास ।
गोबिन्द केसीको अनसनका विषय झट्ट सुन्दा सबैले समर्थन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर त्यस भित्र लुकेका कुरा पहिलो बुझ्नेकि नबुझ्ने । म आफै पत्रकार भएको नाताले भन्नै पर्ने अवस्था आयो निजी क्षेत्र माफिया रे । कसरी माफिया भए । नेपालमा गोरखापत्र, रासस, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल बाहेक सबै मिडिया नीजि लगानीका हुन के उनीहरु मफिया हुन ? अनी हामीले आफुलाई माफिया भन्नेकी नभन्ने । लेख्नु र बोल्नु भन्दा अगाडि एक पटक आफ्नो अनुहार पनि ऐनामा हेर्ने कोसिस गरौं । अरुका बारेमा माफियाको आरोप लगाउदै गर्दा आफुपछि औला फर्किएको पनि ख्याल गर्नु पर्छ ।
बोकेको कुकुरले मृग अवश्यपनि मार्न सक्दैन । लोकमान कार्की कसैलाई मन नपर्न सक्छ, तर मन परेन भन्दैमा एउटा जनताको सेवा गर्नुपर्ने व्यत्ति सेवा छाडेर आन्दोलनमा उतारी राजनीति गर्नु अपराध सिवाय अरु केहि हुनै सक्दैन् । केसी आफ्नो बल बुताले अनसन बसेका हैनन् म दावाका साथ भन्न सक्छु । बरिष्ठ पत्रकार भनिएका कनकमणी दिक्षित जसले बेला बेलामा पत्रकारीता जगतकै बदनाम गर्दै आएका उदाहरण सबैमा जकजायर नै छ । उनी यसका मुख्य योजनाकार देखिएका छन् । ज्योति बानीया लगायत नागरिक अगुवा जसलाई अख्तियारले बेला बेलामा झक्झक्याउने गर्दै आएको छ । उनीहरुले गोविन्द केसीलाई बोकेकै हो । यसमा मलाई भन्न हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन् ।
न लोकमान शिक्षा मन्त्री, न स्वास्थ्य मन्त्री, नत शिक्षा सचिव , नत स्वास्थ्य सचिव यसको भित्रि रहस्य जनताले बुझ्ने कि नबुझ्ने ।
जनता पनि कम छैनन् ।
हामी जनताहरु सत्य कुरामा एकैछिन टिक्न सक्दैनौं । चोर, फटा, गुण्डा भए त्यसका गुनगान गाउन सक्छौं तर ईमान्दार समाज रुपान्तरणका विषय उठाउनेलाई राम्रो मान्न सक्दैनौं यो आज मात्रै हैन परा पुर्वक काल देखिनै चल्दै आएको चलन हो र अहिले पनि निरन्तरता मै छ । हिजो लोकमानले भ्रष्टचारीलाई कार्वाहि गर्दा उसको गुनगान गाउदै सडकमा हिड्ने मानीस पनि हामी नै हौं । आज पनि दिनहु भ्रष्टाचारी समातीएका छन् त्यो न गोविन्द केसीका कारणले हो यात उनका आसेपासेका कारण, समातीयो त सबै अख्तीयारकै कारण । यति सम्म पनि हामी राम्रो मान्ने तर त्यहि व्यत्तिका विषयमा एउटा चिकित्सकले महाअभियोग भन्दा किन जनता मौन । के नेपाल भ्रष्टाचारीकै अखेडा बनाउने हो मानव बेचबिखान गर्ने थलो जस्तै बनाउने हो । लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ भनेर उकास्नेका विरुद्ध किन नलाग्ने मेरो प्रश्न यहा नेर हो ?
त्यहि कनकमणीको अथाहा स्रोत नखुलेको सम्पति अख्तीयारले रोक्का गर्दा वा वाई गर्ने आम नागरिक उनैले केसीलाई बोकेर लोकमानमाथि खनीदा फेरी किन उसकै सपोट के हामी अनपढ र अबुझनै भएका हौत ?
आज केसी अनसनले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा डडेलो लागेको छ । पलाउदै गरेका मुनाहरु अनसनले सबै जलाएको छ । स्वदेशमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरुको रहर पुरा हुन नपाउदै डडेलोले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई खरानी बनाइदिएको छ । राज्यले बुझ्नै नचाहेको हो की बुझेर नबुझेझै गरेको हो । हामीले स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्रार्थमिकतामा राख्ने भए यसमा गंभिर ध्यान जानै पर्छ । एउटा व्यत्ति पटक पटक आमरण अनसनको नाममा आफ्नै अस्पताल प्रयोग गरेर स्वास्थ्य सेवा थप्प पार्र्छ त्यहि पनि अनसनै पिच्छे फरक फरक माग राखेर यसमा के रहस्य लुकेको छ । एउटा राज्यको जिम्मेवार निकालले सोच्ने कि नसोच्ने ।
लाज नभएका नेता
गोविन्द केसीले अनसन बसीकन थुप्रै सरकार परिवर्तन भए । उनको अनसन स्थलमै गएर राजनीतिक पपुलारीटी कमाउने हिसावले एक्यवद्धता जनाउने काम गरे । प्रधानमन्त्री मन्त्री भए तर किन उनी अझै अनसनमै छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाइ व्यापक प्रमोसन गर्ने योजना सहित प्रधानमन्त्री भए डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यति बेला पनि केसी आमरण अनसनको नामले टिचिङ्गमै आन्दोलनमा थिए । त्यति बेला उनका बिषयमा बोल्न नसक्ने भट्टराई आज उनको माग पुरा गर भनेर अगाडि आउनु कतिसम्मको लाजमर्दो विषय हो । कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट माग पुरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यदि हिजो आफै सरकारमा भएका बेला किन सम्बोधन भएनन् आज कांग्रेसलाई बैठकमा सामान्य कुरा उठाउनु लाज लागेन ।
केसीका माग नै कसैलाई थाहा छैन् ।
बिगतमा डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा
सुधारका लागी भन्दै आन्दोलन थाले । जनुबेला मैले पहिलो पटक समाचार नै लेखेर त्यसको विरोध गरे । नेपालका सबै मिडिया केसीको समर्थनमा लागेका थिए । मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, नर्सिङ्ग सम्बन्धन रोक्ने, एमबीबीएसको सिट कटौंति गर्ने, शुल्क निर्धारण जस्ता बिषय उठ्दै आए । राज्यले यसको सुनुवाई गर्दै कार्यन्वयनमा ल्यायो । उनले उठाएका माग गत बर्ष देखिनै लागु भयो । उनले भनेझै एमबीबीएसको सिट १५० बाट १३५ मा आयो, शुल्क करिब ५० लाख लिदै आएकोमा ३५ लाखमा झर्यो, सम्बन्धन रोकियो । उनका माग यिनै हैनन् । सबै लागु भैसेको छन् अनी फेरी आज केको अनसन मैले बुझेको छैन् । एउटा उनको समर्थनमा आन्दोलन गरिरहेको विद्यार्थीलाई पनि यसको उत्तर छैन् । कालगे कान लग्यो भन्दैमा पहिला कान छाम्नेकी कागको पछी दगुर्ने ।
कन्सल्टेन्सीलाई मालामाल ।
डाक्टर गोविन्द केसीको पटक पटकको आमरण अनसनले नेपाली विद्यार्थीको मनोवल गिरेको छ । केसीले सिट संख्या घटाउन दिएको दवाव स्वरुप सरकारले १५० बाट १३५ मा सिट झारेसंगै नेपालमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुको अधिकार खोसिएको छ । नेपालमा संचालनमा रहेका मेडिकल कलेजहरुबाट मात्रै यस आर्थीक बर्षमा सयौ विद्यार्थी देश बाहिर वद्यार्थी गएका छन् । जुन नेपालका मेडिकल कलेजहरुको सिट कटौतिकै विषय थियो । नेपालमा मेडिकल कलेजको सिट कटौंति र विवादका कारण विदेश विद्यार्थी लैजानका लागी नेपालमा कयौं कन्सल्टेन्सीहरु धर्ना स्वरुप काठमाण्डौमा बसेका छन् । विद्यार्थी विदेश पलायन विरुद्ध केसी अनसन बस्नेकी नबस्ने ? जरो यहा छ । नेपालमा अध्ययन गर्न नपाए पछि नेपाली विद्यार्थी विदेश गएर चर्को मुल्यमा पढ्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
अख्तीयारमा केसी अस्त्र
केहि व्यत्ति र सिमित मिडिया लोकमानको अख्तीयारमा नियुत्ति देखिनै विरोधमा लागेका थिए । के पाउ कनिका पोखौ भनेझै लोकमानलाई कुनै अस्त्र प्रयोग गरेर एक खाले मिडिया र सिमित व्यत्ति उनको विरुद्धमा अनौपचारीक रुपमा लागीरहेका थिए । त्यहि अस्त्र आज प्रयोग भयो जुन बेला डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनसन बस्ने भए । उनको बल बुताले पक्कै लोकमान लाई महाअभियोग लगाउने मुद्धा मुख्य थिएन । तर बाहिरी अस्त्र बिचरा केसीमा पर्नगयो । उनलाई बोक्नेहरु आज धेरै भए यो पनि लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा । जुन असम्भव छ भन्ने पर्दा पछाडीका व्यत्तिहरुलाई राम्रो संग थाहा हुदाहुदै पनि आए आपँ गए झटारोका रुपमा केसी अस्त्र परिचालन गरिएको देखिन्छ ।
किन उचालिन्छ केसीलाई यस्तो छ भित्री रहस्य
डाक्टर गोविन्द केसीलाई पटक पटक आन्दोलनमा उतार्ने काम केहि नाम चलेकै व्यत्तिबाट भएको छ । यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन ।
डाक्टर जेपि अग्रवाल, भगवान कोइराला, अर्जुन कार्की मुख्य केसीको योजनाकार मानिन्छन् । पढाईमा अब्बल रहेका उनीहरुले सोचेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन् । उनी संगैका डाक्टर भोला रिजाल, सुरेश कनोडिया, ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की, हरिश न्यौपाने लगायतका साथीहरु जसले चिकित्सा सेवा सहित कलेज संचालन गरेर आर्थीक जोहो गरेको र लाखौलाई रोजगारी दिएका छन् । तर डाक्टर कार्की, कोइराला, अग्रवाल जस्ता चिकित्सकले अस्पतालमा बसेर सिमित विरामी जाच्ने भन्दा अरु काम गर्न नसकेपछि उनीहरुको व्यवसाय धरापमा पार्ने रणनीति अनुसार सिट कटौती शुल्क निर्धारण जस्ता विषय उठाउन केसी अनसन परिचालित गरेको उनीहरुलाई नजिकबाट बुझ्नेहरु बताउछन् । आफुले सरकारी जागीर छाड्ने समय अन्तिम अवस्थामा आएको र आफ्नो भविश्य उज्वल नदेखेपनि नीजि क्षेत्र सखाव बनाउने योजनामा लागेको जानकारहरु बताउछन् । माथेमा प्रतिवेदनमा उनीहरु नै संम्लग्न, वार्तामा उनीहरुनै सम्लग्न केसीका विषयमा जे निर्णय गर्नु परेपनि उनीहरु नै हुन अगाडि सर्ने जसले केसीका योजनाकार प्रस्ट पारेको छ ।
भएका को रोजीरोटि खोसि बेरोजगारी उत्पादन गर्ने मेलो
न गोविन्द केसी न उनका समर्थकहरु जसले समाजमा कुनै योगदान गरेको छैन् । उसले आज चिकित्सा शिक्षाको कुरा उठाउने ? तर मैले माथी उल्लेख गरेको विषय भन्दा तलमाथी अवश्य छैन् । यो लगाई नितान्त इगोको लडाई हो । आफ्नो भबिश्य नदेख्नेले अरुको भबिश्य र लाखौ मानीसको रोजिरोटी खोस्नु पर्छ भन्ने सोचले मात्नु नौलो विषय रहेन । गोबिन्द केसी र उनका नजिकको कोइराला, अग्रवाल, कार्कीहरु अरुलाई पनि आफ्नै अवस्थामा आएको हेर्न चाहान्छन् । उनीहरुलाई विद्यार्थी विदेश पठाएर कुनै पिर मर्का छैन् । एउटा मात्रै उदेश्य हो मेडिकल कलेज बन्द होस् ।
मेडिकल कलेजमा पनि गल्ती छन्
मेडिकल कलेजहरुका गल्ती नभएका हैनन् । उनीहरु पनि पानी माथिको ओभानु बन्ने प्रयास नगरे हुन्छ । गल्ती सरकारका पनि छन् र हरेक नागरिक कुनैन कुनै गल्तीबाट टाढाँ रहन सकेका छैनन् । गल्तीबाटै पाठ सिकेर अगाढि बढ्ने हो । क्वालिटि राम्रो नहुन सक्छ स्रोत साधन नहोला तर अब सुधार्ने समय शिमा दिन आवश्यक छ । सरकारले हो अनुगमन गर्ने, काउन्सील छ तर केसी र कोइराला, अनी क्षेत्रीले हैन अनुगमन गर्ने ।
गोविन्द केसीले सरकारले टिचिङ् अस्पतालमा डिन नियुत्ती र बढुवा गर्दा सिनियारीटिको आधारमा गर्नु पर्छ भनेर सुरु गरेको अनसन मेडिकल कलेजको सिट कटौंति, शुल्क निर्धारण, हुदै लोकमानसिंह कार्कीमाथि कसरी पुग्यो सरकारले एउटा अनुगमन टोलि बनाएर केसीले उठाएका मागमा छानविन गर्न आवश्यक छ । केसीका आठ वटा अनसन सम्म आईपुग्दा आठै वटा विषय फेरीएका छन् । उनी संस्थागत देखी व्यत्तिगत मागमा लाग्नु हिजो सरकारले उनले भनेको निर्णय लागु गराएर महत्वोकाङछामा बढावा दिनुकै परिणाम आजको अनसन हो । त्यसैले राष्ट्रकै हित विपरित रहेर पछिल्ला दिनहरुमा केसी अनसन बस्न थालेका ले उनको अनसनका विषयमा तत्काल छानविन नगरे भोलि केसीकै अनसनले अर्को रुप नलेला भन्न सकिन्न ।